Igbo, Romans, Lesson 004 -- Identification and apostolic benediction (Romans 1:1-7) | Waters of Life
Home -- Igbo -- Romans - 004 (Identification and apostolic benediction)
NDI ROM 1:5-7
5 Site n’aka-Ya ka ayi natara amara na ibu-isi nke nrube isi n’okwukwe n’etiti mba nile n’ihi aha Ya, 6 n’etiti unu ka akpọrọ Jizos Kraist; 7 Nye ndị niile nọ na Rom, ndị Chineke hụrụ n'anya, ndị a kpọrọ ịbụ ndị nsọ
Jizọs Kraịst bụ isi ihe maka onyinye nile nke Chineke. Ọbụghị ndị amụma, ma-ọbụ ndị nsọ, maọbụ nwanyị amaghị nwanyị nwere ike ikpechitere gị n’ihu Chineke n’amara ma ọ bụ ngọzi. Nna nke elu-igwe na-aza ekpere anyị maka Jizọs Kraịst, nihina ọ bụ naanị ya na-arịọchitere Chineke arịrịọ maka anyị. Aha ya bụ ụzọ anyị ga-esi na-ekpegara Chineke ekpere, na-esikwa na ya nweta onyinye mmụọ niile. Ọ dịghị onye ọzọ ma Jizọs na Onye Nsọ mekọrịtara anyị. Ya mere, anyị na-anata n’aka ya njupụta nke amara gụnyere mgbaghara, udo, nzọpụta na ezi omume. Ngọzi ndị ọzọ niile sitere n’aka Chukwu bụ amara, nke anyị ekwesighi.
“Amara” bu nchịkọta nke akwụkwọ ozi Pọl. O nwetara ya n’ime onwe ya, n’ihi na ọ bụ onye na-akpagbu ụka. A zọpụtara ya abụghị n'ihi ịnụ ọkụ n'obi ya, ekpere ya, ma ọ bụ ezigbo ọrụ ya, kama n'ihi ebere nke Chineke enyere ya n'ime Kraịst. Yabụ, wetaara mmadụ niile ozi ọma banyere oke na oke amara, dịka Kraist siri nye gị amara, mgbaghara na udo.
Ozugbo ị ghọtara ma kwupụta ụkpụrụ nke amara, ị ghọrọ onye na-eburu amara, onye na-ekwusa ịhụnanya nke Chineke, na onye ozi nke izi ezi. Mmụọ Nsọ tinyere ozi ya n’ime obi gị? Ma -adọrọ nwayọ, jọrọ njọ, na agbụ ụdọ nke mmehie gị?
Onye obula matara n’ozi oma amara huru Chineke na Kraist ya n’anya, ma rube isi n’iwu nke ebere ya. Okwu a "nrube isi n'okwukwe" putara Paul nzaghachi nke mmadụ na amara a. Chineke agwaghị anyị nrube isi megide uche anyị na agbanyeghị uche anyị, kama, ịrara onwe anyị nye nke nzọpụta maka nzọpụta nye Onye Nzọpụta anyị na Onye Mgbapụta. Pọl kpọrọ onwe ya ohu nke Jizọs Kraịst. N’uche a, o nyere nkọwa zuru oke banyere okwu ahụ “nrube isi n'okwukwe ahụ”. GI bu onye oru Kraist? Chineke agbaghara mmadụ niile, oge niile, mmehie ha niile n'ihi Kraist. Dika anyi ahutaghi ozi ozo bara uru ma nye aka nye mmadu dika nke a, anyi na - akpo ndi nile anyi maara ka edo onwe ha n’okpuru Chineke ma hu Kraist ya n’anya, ma hu ike nke amara ya. Nso akwa etop! Emere kpọrọ ndị enyi gị ka ha rubere okwukwe na Onye na-enye gị amara niile?
Ndị ụka ụka Rom bụ ndị Kraist kpọrọ Kraịst, ọ bụghị Pọl ma ọ bụ onye ọzọ. Nke a bụ ihe omimi nke ezi okwukwe: na ọ dịghị onye na - akpọ mmadụ ọzọ nzọpụta, belụsọ mgbe onye ọkpụkpọ ahụ nọ n'ọnọdụ kacha mma, n'ihi na anyị bụ ngwa dị n'aka Onyenwe anyị. Jizọs họọrọ na-akpọ ndị na-eso ụzọ ya onwe ya na doro anya. Olu-ya erurururu n’obi; n’ihi na ọ bụ olu Onye na-akpọlite ndị nwụrụ anwụ. Okwu a "churchka" pụtara nnwekọ nke ndị akpọrọ hapụrụ ndị na-ejighị aka ekpe, ma were ọrụ nke ịhụnanya n'ọrụ Chukwu. Akpọrọ gị otu n’ime Jizọs Kraịst? N'aka nke ọzọ, ọ bụ na ị ka abaghị uru na enweghị mkpụrụ? Okpukpe anyi bu Oku nke Oku.
Onye nabatara oku ma zaa oku a bu onye Chineke huru n’anya. Lee ka nkwupụta ahụ si maa mma ma dị ebube, nke na-akọwa ndị Ndị Kraịst bụ! Ha bụ ndị ikwu nke Onye Kachasị Elu, mara ya ma sọpụrụ ya. Ozokwa, Chineke agbadata na ọkwa ha ma, n'ihi mkpuchi mmehie ya, mere ha ndị tozuru oke maka mkpakọrịta. Ihunanya nke Chineke kariri n'anya nke ndi nne na nna nye umu ha, ma obu ihu oma nke di na nwunye. Ihụnanya Chineke n'anya dị nsọ, ọ naghị ada ada. Gi bụ otu n’ime ndị Chineke hụrụ n’anya, jupụta n’ịhụnanya ya, ma na-eje ije n'ịdị nsọ ya?
Kraist kporo anyi ka n’agha gbaghara anyi, irube isi na iso anyi. Nchikota njiri mara ndia bu idi nso. Onweghi onye dị nsọ na nke onwe ya, mana site na njikọta anyị na Onye Ngbapụta mgbapụta ahụ, anyị tozuru oke ịnata Mmụọ Nsọ. Naanị site na amara ka anyị nwere ike bụrụ ndị dị nsọ na ndị enweghị ụta zuru oke n'ihu Chineke n'ịhụnanya. Ndi nsọ nile kewapuwo n’uwa, eweputara ha maka ijere Chineke ozi. Ha abụghị nke onwe ha ma ọ bụ nke ndị ikwu ha ọzọ, n'ihi na ha bụ nke Chineke maka ọrụ nke ịdị nsọ. Ndi afo edi kiet ke otu mmọ? Nso ji amara dị nsọ n'ezie?
EKPERE: Chineke nso anyi, I kporo anyi n’ime Jizos Kraist ka anyi di ocha. Anyị na-ekwupụta ezighi ezi anyị, ma na-arịọ maka mgbaghara nke mmehie anyị niile amaghi ama ama. Anyi n’ekele gi n’ihi na ihuru anyi n’anya ma were obara Kristi sachaa anyi, jirikwa mmuo nso doo anyi nsọ. Gbanwee ndu anyi niile ka anyi we buru nke gi na oge anyi niile, ma hu gi n’anya dika i huru anyi n’anya.
Gini bu amara, gini bu nzaghachi nke mmadu?
Page last modified on January 25, 2021, at 04:12 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)